oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation- ဆက်စပ် downregulation: miRNA ဗီဇ၏ DNA methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်
oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation-ဆက်စပ် downregulation: miRNA မျိုးဗီဇ၏ DNA methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019)
comments: hypersexuality နှင့်အတူဘာသာရပ်များအပေါ်လေ့လာမှု (porn / လိင်စွဲ) အရက်သမားအတွက်ဖြစ်ပေါ်သူတို့အား mirroring ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကတင်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကို (စသည်တို့ကိုမတ်ေတာ, Bond, စွဲလမ်း, စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်အရေးကြီးသောအရာ) ကို oxytocin စနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်ဗီဇထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မီးမောင်းထိုးပြထားသည်:
ဦး နှောက်၏ oxytocin system အတွက်လိင် / porn စွဲသူများ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအမှတ်အသားများသည်အရက်သမားများနှင့်ဆင်တူသည်
လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်ဆက်စပ်နေသည် Kuhn & Gallinat, 2014 (porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ကျော်ကြား fMRI လေ့လာမှု)
တွေ့ရှိချက်များ (စွဲလမ်းအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်သည့်) အလုပ်မဖြစ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုညွှန်ပြနိုင်
oxytocin ဗီဇအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းစသည်တို့ကို Bond, စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း
ပိုပြီးအဘို့, ဒီအစားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ Lay ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး: သိပ္ပံပညာရှင်များအလားအလာ hypersexual ရောဂါဆက်စပ်ဟော်မုန်းခွဲခြားသတ်မှတ်
Adrian E. Boström၊ Andreas Chatzittofis၊ Diana-Maria Ciuculete၊ John N. Flanagan, Regina Krattinger, Marcus Bandstein၊ ဂျက်စီကာ Mwinyi၊ Gerd A. Kullak-Ublick၊ )
ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း, Doi: https://doi.org/10.1080/15592294.2019.1656157
အဆိုပါ DSM-5 နှင့်ခွဲခြား '' compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder '' တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုယခု ICD-11 အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်တင်ပြထားပါသည်အဖြစ် Hypersexual ရောဂါ (HD) အဆိုပြုထားခဲ့ပါတယ်။ HD ကိုတော်တော်များများ pathophysiological ယန္တရားများထည့်သွင်း; Impulse, compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ dysregulation နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပါအဝငျ။ အဘယ်သူမျှမကယခင်လေ့လာမှု microRNA (miRNA) ဆက်စပ်စင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များမှကန့်သတ်မယ့် methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် HD ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇကျယ်ပြန့် methylation ပုံစံဟာ Illumina EPIC BeadChip သုံးပြီး HD နှင့် 60 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ 33 ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်မြေတပြင်လုံးသွေးထဲမှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ 8,852 miRNA ဆက်စပ်စင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များမျိုးစုံ linear ဆုတ်ယုတ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်အကောင်းဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြတ် covariates များအတွက်ချိန်ညှိ, ရောဂါပြည်နယ် (HD သို့မဟုတ်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း) ၏ဒွိလွတ်လပ်သော variable ကိုမှ methylation က M-တန်ဖိုးများလေ့လာဆန်းစစ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း miRNAs ၏ expression အဆင့်ဆင့် differential ကိုစကားရပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တူညီတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း methylation loci နောက်ထပ် 107 ဘာသာရပ်များတစ်ခုလွတ်လပ်သောဆောင်များတွင်အတွက်အရက်မှီခိုနဲ့အသင်းအဖွဲ့များအတွက်လေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးအားစင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များ HD မှာသိသိသာသာနယ်စပ်ဒေသခဲ့ကြသည် - cg18222192 (MIR708) (p <10E-05,pFDR = 5.81E-02) နှင့် cg01299774 (MIR4456) (p <10E-06, pFDR = 5.81E-02) ။ MIR4456 သိသိသာသာနိမ့်နှစ် ဦး စလုံး univariate (p <0.0001) နှင့် multivariate (p <0.05) ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် HD ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Cg01299774 methyl အဆင့်ဆင့်ပြောင်းပြန် MIR4456 (p <0.01) ၏စကားရပ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်လည်းကွဲပြားခြားနားအရက်မှီခို (p = 0.026) တွင် methylated ခဲ့ကြသည်။ Gene ပစ်မှတ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက MIR4456 သည် ဦး နှောက်တွင် ဦး စားပေးဖော်ပြသောမျိုးဗီဇများကိုရည်ညွှန်းပြီး၎င်းသည် HD နှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကအာရုံခံဆဲလ်မော်လီကျူးယန္တရားများတွင်ပါ ၀ င်သည်၊ ဥပမာ - oxytocin အချက်ပြလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည် MIR4456 ၏အလားအလာရှိသောပါဝင်မှုကိုအောက်တိုတိုစီအချက်ပြမှုကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းဖြင့် HD ၏ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၌ပါ ၀ င်သည်။
ဆွေးနွေးရန်အပိုင်း FROM မှ
အရံသွေးထဲမှာနေတဲ့ DNA methylation အသင်းအဖွဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့သိသိသာသာ differential HD ကိုလူနာ methylated ဖြစ်ကြောင်း MIR708 နှင့် MIR4456 နှင့်ဆက်စပ်ကွဲပြားစင်ကာပူအခြေစိုက် CPG-က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖေါ်ထုတ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ hsamiR- 4456 ဆက်စပ် methylation locus cg01299774 ကအဓိကအား HD မှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့်စွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, အရက်မှီခိုအတွက် differential methyl ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမရှိယခင်စက္ကူ psychopathologies တစ်ဦးအခြေအနေတွင် MIR4456 ၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါတို့သည်ဤ miRNA evolutionarily မူလတန်း sequence ကိုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မျောက်ဝံများ၏ထွန်းထံမှအလယ်တန်းအဆောက်အဦများ hairpin ခန့်မှန်းကြောင်းကိုဖေါ်ထုတ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ MIR4456 ၏ putative mRNA ပစ်မှတ်ဦးစား amygdala နှင့် hippocampus အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား, Kühn et al နေဖြင့်အကြံပြုနှစ်ခုဦးနှောက်ဒေသများသည်။ HD ကို  ၏ pathophysiology ်ပတ်သက်နေခံရဖို့။
ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ oxytocin အချက်ပြလမ်းကြောင်းများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု Kafka et al နေဖြင့်အဆိုပြုအဖြစ်သိသိသာသာ HD ကို defining ဝိသေသလက္ခဏာများအများအပြားအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခံရဖို့ပုံရသည်။ , ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ dysregulation, compulsive, Impulse နှင့် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) စွဲလမ်းအဖြစ်။ အဓိကအားဖြင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နှင့် posterior pituitary နေဖြင့်ဖြန့်ချိ, oxytocin  ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွါးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မာဖီ et al ။ လိင်စိတ်နိုးထ  စဉ်အတွင်းမြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Burri et al ။ အမျိုးသားများတွင် intranasal oxytocin application ကို  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း epinephrine ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနှင့် arousal တစ်ဦးပြောင်းလဲအမြင်မှုတွေ့။ ထို့အပြင် oxytocin စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားစီးဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jurek et al ။ oxytocin intracellular ယန္တရားများ, အ paraventricular နျူကလိယအတွင်းပြင်းထန်စွာဖိစီးမှုကိုတုံ့ပြန်မှု  ဆက်နွယ်နေတဲ့မျိုးဗီဇ corticotropin-releasing အချက် (Crf) ၏ကူးယူရွှေ့ဆိုင်း receptormediated ကြောင်းလေ့လာသည်။
အဆိုပါ oxytocin အချက်ပြလမ်းကြောင်းအတွက် ALTER Chatzittofis et al အားဖြင့်တွေ့ရှိချက်ရှင်းပြနိုင်ဘူး။  hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး dysregulation လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့သူ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများ  oxytocin obsessive-compulsive ရောဂါ၏ pathophysiology တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ dopamine စနစ်ဖြင့် oxytocin များ၏အပြန်အလှန်သည် HPA-ဝင်ရိုးနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က oxytocin အဆင့်ဆင့်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစွဲအားနည်းချက်  ထိခိုက်သော postulation မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ oxytocin ယခင်ကလူမှုရေးနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, Johansson et al နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နေစဉ်။ နောက်ထပ် oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ (OXTR) တွင်မျိုးဗီဇမူကွဲ  အရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအမျက်ဒေါသ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူအခြေအနေများတုံ့ပြန်ရန်စိတ်သဘောထားအပေါ်ထိခိုက်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့Brüne et al ။ OXTR အတွက်မျိုးဗီဇမူကွဲနယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ  ပြင်းထန် Impulse dysregulation  ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါဗေဒ၏ pathophysiology ရှင်းပြဖို့အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု၌ထင်ရှားမခံခဲ့ရကြောင်း HD မှာတစ်ဦးအပိုဆောင်းစည်းမျဉ်း function ကိုရှိ MIR4456may ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, ယခင်လေ့လာမှုများစိတ်ဓာတ်တစ်ဦးချင်းစီ  တွင် glutamatergic စနစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ထစ်အငေါ့အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မျိုးဗီဇ၏အသင်းအဖွဲ့များကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။ ထို့ပြင် 3'-5'-သိသိ adenosine မိုနိုဖော့စဖိတ် (Camp) ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception အတွက်အဆင့်ဆင့်ဟာ phosphoprotein- 32 ပြောင်းလဲပစ်နှင့် progestin receptors  ၏ပြောင်းလဲရန်ဦးဆောင်အသုံးပြုပုံအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာစခန်းကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအထီးကြွက်များတွင်ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သော B69gnt3 ဗီဇအဖြစ် axon လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်မော်လီကျူး  ထိန်းညှိ
သိပ္ပံပညာရှင်များအလားအလာ hypersexual ရောဂါဆက်စပ်ဟော်မုန်းခွဲခြားသတ်မှတ်
hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ဂျာနယ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရလဒ်များကိုသည်နှင့်အညီ, မှာ oxytocin တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အလားအလာက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်ဖို့လမ်းအင်ဂျင်နီယာအားဖြင့်ရောဂါကုသရန်အတွက်တံခါးကိုဖွင့်နိုင်ဘူး။
Hypersexual ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး overactive လိင် drive ကို, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်စာရင်းဝင်တစ်ဦး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်အလားအလာပြဿနာများသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များကိုသယ်ဆောင်သည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖျော်ဖြေဖို့လိင်တစ်ဦးမလှူ၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအတှေးအနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါသည်။ ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းကွဲပြားခြားနားနေစဉ်တွင်, စာပေ hypersexual ရောဂါလူဦးရေရဲ့ 3-6% သာသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒါကြောင့်မကြာခဏကရှိပြီးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခု extension ကိုသို့မဟုတ်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကြံပြုခြင်းအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအတူဖြစ်ပေါ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အငြင်းပွားဖွယ်ရာရောဂါဝန်းရံ။ Little ကနောက်မှာ neurobiology အကြောင်းကိုလူသိများသည်။
အက်စပလာတက္ကသိုလ်မှ ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဌာနမှ ဦး ဆောင်စာရေးသူအက်ဒရီယန်ဘော့စရမ်က“ ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexual disorder နောက်ကွယ်မှဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာယန္တရားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ စတော့ဟုမ်း၊ ကာရိုလင်စကာအင်စတီကျူမှ Andrology / Sexual Medicine Group (ANOVA) မှသုတေသီများနှင့်လေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအရကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည် DNA methylation နှင့် microRNA လုပ်ဆောင်မှုနှင့် dysregulated epigenetic ယန္တရားများနှင့် hypersexuality ကိုကုသရန်လူနာများအကြား ဦး နှောက်အတွင်းရှိ oxytocin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ”
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူ 60 လူနာထံမှသွေးထဲတွင် DNA methylation ပုံစံများကိုတိုင်းနှင့် 33 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းထံမှနမူနာသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။
သူတို့ကနမူနာအကြားမည်သည့်မူကွဲကိုသိရှိနိုင်ဖို့အနီးအနား microRNAs မှဆက်စပ် DNA methylation ၏ 8,852 ဒေသများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ DNA methylation ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုလျော့ချဖို့သရုပ်ဆောင်, မျိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်မျိုးဗီဇ၏ function ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ DNA methylation ပြောင်းလဲမှုများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာရှိသုတေသီဆက်စပ်သော microRNA ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်၏အဆင့်ဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ သူတို့ကသွေးသည်ဦးနှောက်-အတားအဆီးရှောက်သွားနှင့်ဦးနှောက်နှင့်အခြားတစ်ရှူးအတွက်ရာပေါင်းများစွာသောကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇမှတက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး modulate သို့မဟုတ်နိမ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ် MicroRNAs အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကအစစွဲလမ်းအပြုအမူနဲ့အသင်းအဖွဲ့စူးစမ်းဖို့, အရက်-မှီခိုခဲ့ကြ 107 ဘယ်သူကို၏ 24 ဘာသာရပ်များမှနမူနာ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်။
ရလဒ်များ hypersexual ရောဂါလူနာများတွင်ပြောင်းလဲခဲ့ DNA ကိုနှစ်ခုဒေသများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ DNA methylation ၏ပုံမှန် function ကိုနှောင့်အယှက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇတိတ်ဆိတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ခုဆက်စပ် microRNA, အောက်မှာ-ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ analysis microRNA-4456, အ microRNA ဖော်ထုတ်ကြောင်းထင်ရှား, သာမန်အားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုအထူးမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်မှာ oxytocin ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဖြစ်ကြောင်းဗီဇပစ်မှတ်ထား။ လက်ရှိလေ့လာမှုကဒီအတည်ပြုပါဘူးပေမယ့်ဗီဇလျှော့ချအသံတိတ်နှင့်အတူ, oxytocin, မြင့်မားသောအဆင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ neuropeptide oxytocin pair တစုံ-Bond အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍတိကျတဲ့ vole နှင့်မျောက်မျိုးစိတ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ oxytocin အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လူမှုရေးနှင့် pair တစုံ-Bond, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွါးခြင်းနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ အရက်-မှီခိုဘာသာရပ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကအဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့သောလိင်စွဲလမ်း, dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, compulsive နှင့် Impulse အဖြစ် hypersexual ရောဂါ၏စွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, အောက်မှာ-methyl သိသိသာသာဖြစ်တူညီသော DNA ကိုဒေသဖော်ပြခဲ့တယ်။
hypersexual disorder အတွက် microRNA-4456 နှင့် oxytocin တို့၏အခန်းကဏ္investigကိုစုံစမ်းရန်နောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ရောဂါကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာခြင်းသည် oxytocin ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်ဟုUmeåမှပါမောက္ခ Jussi Jokinen ကပြောကြားသည်။ တက္ကသိုလ်, ဆွီဒင်။
အဆိုပါစာရေးဆရာလေ့လာမှုတစ်ခုန့်အသတ် hypersexual ရောဂါလူနာများနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြား DNA methylation အတွက်ယုတ်ကွာခြားချက်သာ 2.6% န်းကျင်ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများအပေါ်သက်ရောက်မှုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါကြောင်းသတိပြုပါ။ သို့သျောလညျးပဲသိမ်မွေ့ methylation အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများအဘို့အကျယ်အထိအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ကိုသက်သေအထောက်အထားအကြံပြုချက်များတစ်ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုUmeåတက္ကသိုလ်နှင့်Västerbottenကောင်တီကောင်စီအကြားဒေသဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် (ALF) မှတဆင့်နှင့်စတော့ဟုမ်းကောင်တီကောင်စီတို့ကထောက်ပံ့ပေးထောက်ပံ့ငွေများကအဖြစ်ဆွီဒင်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းက, အÅhlens Foundation မှ, ထို Novo Nordisk ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ဆွီဒင်ဦးနှောက်သုတေသနများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။
Hypersexual Disorder နဲ့စှဲအပြုအမူဖို့လင့်ခ်လုပ်ထားသောဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်အပြောင်းအလဲများ
Adrian အီးBoström MD: အတူ MedicalResearch.com အင်တာဗျူးယင်းစာရေးဆရာကိုယ်စား
အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန, Uppsala တက္ကသိုလ်, ဆွီဒင်
တုန့်ပြန်: ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းကွဲပြားခြားနားနေစဉ်တွင်, စာပေ hypersexual ရောဂါ (HD ကို) ကလူဦးရေရဲ့ 3-6% သာသက်ရောက်ပါတယ်။ ညွှန်ပြ သို့သော်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရောဂါဝန်းရံအနည်းငယ်သာနောက်ကွယ်မှ neurobiology အကြောင်းကိုလူသိများသည်။
Hypersexual Disorder သည် epigenomic နှင့် transcriptomics နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိသောလေ့လာမှုနည်းလမ်းဖြင့်လေ့လာခြင်းမရှိသေးပါ။ ဤရောဂါနောက်ကွယ်ရှိ neurobiology အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။ hypersexual disorder (HD) လူနာများတွင်ဗီဇလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖော်ပြမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် Epigenetic အပြောင်းအလဲများရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဦး နှောက်ရှိ oxytocin ဟော်မုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသည်ဟုယုံကြည်သော dysregulated microRNA ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Oxytocin သည်ကျယ်ပြန့်သည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများရှိသည်ဟုလူသိများသည်။ သိပ္ပံပညာအရအကောင်းဆုံးသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ DNA methylation၊ microRNA လှုပ်ရှားမှုနှင့် oxytocin တို့မှာ hypersexual disorder မှာဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည် MIR4456 နှင့် hypersexual disorder အတွက်အထူးသဖြင့် Oxytocin တို့၏အခန်းကဏ္ in အတွက်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်ထိုက်တန်သည်။ HD တွင် Oxytocin ၏အခန်းကဏ္confirmကိုအတည်ပြုရန်နှင့် oxytocin antagonist မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံးဖြင့်ကုသမှုသည် hypersexual disorder ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
တုန့်ပြန်: - ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တစ်ဦးအယူအဆ-အခမဲ့ဖြင့်ဘက်မလိုက်ထုံးစံ၌ sequenced 8000 ကွဲပြားခြားနားသော DNA methylation ကျော်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ဥပမာလမ်းကြောင်းအချက်ပြသည့် oxytocin စိတ်ဝင်တစားလေ့လာခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇပစ်မှတ်ထားတစ်ဦးအားပြင်းထန်စွာ dysregulated microRNA အဓိကအားဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့် hypersexual ရောဂါများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ထင်အဓိကအာရုံခံမော်လီကျူးယန္တရားများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အံ့သြသွားခဲ့ကြသည်။ ဤ မိုက်ခရိုနာ ထို့အပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ရှိချက်ဖြစ်သောမျောက်ဝံတစ်လျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပေါ်လာသည်။
တုန့်ပြန်: Hypersexual ရောဂါ Impulse, compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ dysregulation နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသော pathophysiological ယန္တရားများထည့်သွင်း။ ဤသည် hypersexual ရောဂါစွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်နေပေမယ့်သီးသန့်အနေနဲ့စွဲလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့မကြောင်းဤကဲ့သို့သောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်, အရက်မှီခိုအတူ crossover ၏အလငျး၌, MIR4456 နှင့် oxytocin အချက်ပြလမ်းကြောင်း hypersexual ရောဂါ၏စွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူအဓိကအားပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝကဤအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။
တုန့်ပြန်: ကျွန်ုပ်တို့၏ရလာဒ်များသည်ဥပမာ - hypersexual disorder တွင်မူးယစ်ဆေးကုထုံးကိုထိန်းညှိသော oxytocin ၏ထိရောက်မှုကို ထပ်မံ၍ သုတေသနပြုခြင်းအားလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ထိခိုက်သူများ၏လက်တွေ့ရလဒ်ကိုတိုးတက်စေရန်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်အနာဂတ်အလားအလာရှိသော miRNA အားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိန်းချုပ်သော hypersexual disorder တွင်စမ်းသပ်နိုင်သည့် microRNA (miRNA) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။
MedicalResearch.com: သင် add ချင်ပါတယ်အရာအားလုံးထက်ရှိပါသလား?
တုန့်ပြန်: ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA သည်ပရိုတိန်းဟုခေါ်သည့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အမျိုးမျိုးကိုဘာသာပြန်ပေးသောမျိုးရိုးဗီဇအတွက်မျိုးရိုးဗီဇကုဒ်ဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းများသည်သက်ရှိအားလုံး၏အဓိကအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA သည်အမွေဆက်ခံပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမပြောင်းလဲပါ။ ဒီလေ့လာမှုကဗီဇလှုပ်ရှားမှုနဲ့ထုတ်ဖော်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တဲ့ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဤရွေ့ကားဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲ၍ အချို့သောရောဂါများတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများရှိသည်။
ဤလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် DNA methylation (ပရိုတိန်းအဖြစ်သို့ဘာသာပြန်ထားသောမျိုးဗီဇပမာဏ) နှင့် microRNA လှုပ်ရှားမှု (ရာပေါင်းများစွာ၏ဘာသာပြန်ချက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အတိုမဟုတ်သော coding ဗီဇအပိုင်းအစများ) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇ) ။
hypersexual Disorder နှင့်အတူလူနာများကိုကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hypersexual Disorder တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမည့် DNA methylation sequence ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်၏အရေးပါမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တူညီတဲ့ဒီအန်အေအစီအစဉ်ကိုအရက်သေစာမှီခိုမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းထပ်မံပြသခဲ့သည်။ ဖော်ထုတ် DNA methylation sequence ကို (microRNA 4456; MIR4456) ဟုခေါ်သော microRNA နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရဤ DNA methylation sequence သည်ထုတ်လုပ်သော MIR4456 ၏ပမာဏအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် MIR4456 သည်စိတ်စေတနာအလျောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် hypersexual disorder ၌သိသိသာသာနိမ့်သောပမာဏရှိကြောင်းပြသပြီးအပြောင်းအလဲရှိသည့် DNA methylation ပုံစံများသည် hypersexual disorder ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် MIR4456 ၏လေ့လာမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအားရှင်းပြရာတွင်အထောက်အကူပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ microRNA: s သည်သီအိုရီအရရာပေါင်းများစွာသောကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MIR4456 သည် ဦး နှောက်တွင် ဦး စားပေးဖော်ပြသော HD နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆရသောအဓိကအာရုံခံဆဲလ်မော်လီကျူးယန္တရားများတွင်ပါ ၀ င်သောမျိုးဗီဇများကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်ကွန်ပျူတာ algorithms ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အချက်ပြလမ်းကြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည် MIR4456 နှင့် hypersexual disorder အတွက်အထူးသဖြင့် Oxytocin တို့၏အခန်းကဏ္ in အတွက်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်ထိုက်တန်သည်။ HD တွင် Oxytocin ၏အခန်းကဏ္confirmကိုအတည်ပြုရန်နှင့် oxytocin antagonist မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံးဖြင့်ကုသမှုသည် hypersexual disorder ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
သီးခြားနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုအတွက် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသေးသောအချက်အလက်များသည် hypersexual disorder နှင့်အတူလူနာများတွင် Oxytocin အဆင့်များမြင့်မားစွာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုနှင့် Oxytocin အဆင့်သိသိသာသာလျှော့ချခြင်း, သိသိသာသာအပြုအမူကုသမှုကုသမှုပြီးနောက် Oxytocin ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုအခန်းကဏ္impကိုပြသ hypersexual ရောဂါနှင့်ဤလေ့လာမှုမှာတင်ပြတောင်းဆိုမှုများအများကြီးပိုမိုအားကောင်းအောင်။ ဤပဏာမရလဒ်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မေလဇန်န ၀ ါရီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုအစည်းအဝေးတွင်ကြေကွဲဖွယ်ပိုစတာတစ်ခုအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ACNP တွင်ပိုစတာအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့သည်။
Adrian အီးBoström et al, oxytocin အချက်ပြအပေါ် putative သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ hypersexual ရောဂါအတွက် microRNA-4456 ၏ Hypermethylation-ဆက်စပ် downregulation: miRNA မျိုးဗီဇ၏ DNA methylation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း (2019) ။ Doi: 10.1080 / 15592294.2019.1656157